Huawei dia mitifitra ny iPad Pro miaraka amin'ny MatePad Pro 5G | Vaovao IPhone
Fantatray fa tia maka tahaka zavatra ny sinoa. Ao amin'ny ràn'izy ireo izany. Isaky ny mamoaka fitaovana vaovao i Apple, dia tsy fahita firy ny marika sinoa iray na ny iray hafa mandika ny endrika ivelany. Ankehitriny dia anjaran'ny iPad Pro.
Huawei dia vao avy nanangana takelaka vaovao, ary ivelany dia nofantsihina tamin'ny Apple Pro iPad. Toy ny ivelany dia toa iPad, amin'ny atiny tsy misy loko. Na dia ny sary masina aza dia mitovy amin'ny an'ny Apple, ny firmware an'ny Huawei manokana dia maivana taona mialoha ny iPadOS. Tsy fantatro izay tadiavin'izy ireo hadalana.
Tamin'ny herintaona dia niseho ny sary nivoahana voalohany an'ny Huawei MatePad Pro 5G. Ny fitoviana amin'ny Apple iPad Pro, miaraka amin'ny Smart Keyboard ary Apple Pencil, dia efa nahagaga tamin'ny androny. Saingy tsaho fotsiny izany. Mety ho sandoka ny horny sasany amin'ny fifehezana ny Photoshop. Ankehitriny dia efa namoaka ny fitaovana i Huawei, ary marina ireo sary tafaporitsaka. Notadiavin'izy ireo izany, andao.
En 9to5Google Efa nanandrana izany izy ireo, ary izao no lazain'izy ireo momba izany:
Ny Huawei MatePad Pro 5G dia manana fitoviana hafahafa amin'ny iray amin'ireo vokatra tsara indrindra an'ny Apple. Amin'ny fotoana tsy fahita firy ny takelaka Android "tsara", mety ho io ve ny valiny nandrasan'ny maro taminareo? Tonga hizaha izany isika.
Ny M-Pen koa dia maka tahaka ny fametahana andriamby sy ny famahanana tsy misy tariby ny Apple Pencil an'ny taranaka faharoa, ary ny tranga fitendry dia mitovy amin'ny an'ny Apple's Keyboard Keyboard Folio amin'ny ankapobeny.
Mazava ho azy, ao anatiny no mahasamihafa azy: iPadOS. Ary tsy manana fidirana mivantana amin'ireo fampiharana Google ihany koa izy io, noho ireo orinasa amerikana manakana an'i Huawei.
Tsy io irery no "kopian'ny" fitaovana Apple navoakan'ny Huawei androany. Ilay mpandahateny Huawei Sound X dia hita ihany koa tamin'ny taon-dasa, toa ny lakroa eo anelanelan'ny HomePod sy Mac Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Android » Huawei dia mitifitra ny iPad Pro miaraka amin'ny MatePad Pro 5G
Tsy hisy izany